विचार / बहस Archives | Page4of5| Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - हरितालिका तीजको अवसरमा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दिए छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश - page 4
हरितालिका तीजको अवसरमा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दिए छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश
८ भदौ, काठमाडौं । विशेषतः हिन्दू नारीहरुले आज महान चाड हरितालिका तीज मनाउँदैछन् । दिनभरि पानी पनि नखाई निर्जल वा निराहार बस्ने व्रत भएकाले एक दिनअघि नाचगान रमाइलो गरी राति दरका रूपमा मीठा परिकार खाने चलन रहेता पनि केहि वर्ष यता यसमा आधुनिकताको नाउँमा महिना दिन अघि देखि नै दर खाने र खुवाउने चलन वस्तै आएको छ । हरितालिका तीजको दिन आज बिहानैदेखि देशभरका शिवालय तथा मन्दिरहरुमा ब्रतालुको भीड लागेको छ । तीजका लागि सरकारले आज सार्वजनिक विदा पनि दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
अमेरिकी राजनैतिक दुर्घटना र बचाउ
जेफ्रे डी स्याक्स न्यूयोर्क, ३२ साउन । आफ्नोे आर्थिक कार्यसूची सम्हाल्न र विश्वसनीय वैदेशिक नीति तय गर्न नसक्दा संयुक्तराज्य अमेरिका अहिले एउटा गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनाको संघारमा छ । ह्वाइट हाउस सकसमा छस काँग्रेस प्रभावहीन भएको छस अनि सारा संसारले भयले हेरिराखेको छ । यदि हामीलाई यो विध्वंसबाट बच्नु र पार पाउनु छ भने यसका श्रोतहरु थाहा पाउनु जरुरी छ । वासिङ्टन डीसीमा दुई शक्ति केन्द्र छन्– ह्वाइट हाउस तथा क्यापिटोल । अहिले दुवै असमञ्जस्य अवस्थामा छन् तर विभिन्न कारणले । ह्वाइट हाउसको अकर्मण्यता मूख्यतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ब्यक्तित्वको कारण हो ।	थप पढ्नुहोस्
पशुपतिनाथ र कृष्णमन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड
३० साउन, काठमाडौं । साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथमा दर्शन एवं पूजाका लागि भक्तजनको भीड लागेको छ । बिहान दुई बजेदेखि जम्मा भएका भक्तजनका लागि ३ः३० बजेदेखि पशुपतिका चारै ढोका खोलिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । साउन महिनाको अन्तिम सोमबार भएकाले अघिल्ला सोमबारभन्दा भक्तजनको भीड बढी रहेको कोषका निर्देशक एवं पशुपति मन्दिर तथा गुठी शाखा प्रमुख भोला सिटौलाले जानकारी दिए । पशुपति मन्दिरमा ३९० र वासुकी मन्दिरमा ११० जनाले विशेष पूजाका लागि रसिद काटेको उनले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
आज चन्द्रग्रहण, २ बजेर ७ मिनेटदेखि भोजन नगर्न अुनरोध
२३ साउन, काठमाडौं । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज राति चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । आज राति ११ बजेर सात मिनेटदेखि ग्रहणले स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । राति १२ बजेर ६ मिनेटमा ग्रहणको मध्यकाल हुनेछ । एक बजेर चार मिनेटमा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिने उनले बताए । एक घण्टा ५७ मिनेट लाग्ने ग्रहण नेपालबाट पनि देखिनेछ । चन्द्रबिम्बको दक्षिण दिशामा मात्रै कालो छायाँ देख्न सकिन्छ । छायाँ आग्नेयकोणबाट प्रवेश गरी नैऋत्यकोणबाट बाहिर निस्कन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
विजय यादव झन्डै एक दशकअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले कोशी आसपासका जिल्लाहरूमा धेरै ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । कयौं जना घरबारविहीन भए, खेतका बाली–नाली नष्ट भयो, महामारी फैलिए र त्यस क्षेत्रका जनताहरू भोकमरीका शिकार हुन पुगेका थिए । हजारौं मानिसहरू त्यस क्षेत्रबाट एक किसिमले पलायन नै भए । त्यसपछि हरेक साल यस्तै बाढीका कहरले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पिरोलीरहेको छ । दशकौं बितिसक्दा पनि तिनीहरूको दुःखमा मल्हम लगाउन कोही पनि आएका छैनन् । आश्वासन भने सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट आए पनि तिनीहरूको पीडामा कुनै कमी भने आएको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
स्थानीय तहमा एमालेको जीतसँगै उब्जेका प्रश्न ?
मनोजकुमार कर्ण एमालेले स्थानीय निर्वाचनको दुई चरणलाई पूर्णतः आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’को जीत अर्थ लगाउने भईहाले किनकि सबभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो नम्बरको पार्टी बनेको छ । थेसिस, एन्टिथेसिस वा सिन्थेसिस जे लगाएपनि आखिरमा एमाले सबभन्दा बढी सिट जितेको आँखाले देखेको र दिमागले गन्न सकिने परिणाम हो जसलाई स्विकार्नु पर्छ । एमालेले मधेशमा झन मधेशवादी दलका पदाधिकारीहरुलाई नै निर्वाचनको मुखमा भित्र्याएको हुनाले हामी नै हौं को भावना किन नपलाओस् ? एमालेलाई लाग्या होः वृद्धभत्ताको शुरुवाती कदम उसैको हो ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाली समाजमा लोकसेवा आयोगको भूमिका
लक्ष्मी विलास कोइराला नेपालको निजामती प्रशासनको ईतिहास मूल्याकंन गर्दा तत्कालिन शासक राजाहरू मुखको भरमा सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति र पजनी गर्ने गर्दथे ।	थप पढ्नुहोस्
राजपाको कमजोर आन्दोलनको अवस्था
उपेन्द्र झा प्रदेश नं. २ बाहेक सबै प्रदेशमा चुनाव भई सकेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार एमाले पहिलो, नेपाली काँग्रेस दोश्रो र माओवादी केन्द्र तेश्रो स्थान लिन सफल भएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरम, संसफो नेपाल र नयाँ शक्तिले लिएको आशा पूरा हुन सकेन, तथापि आफनो उपस्थिति भने दर्ज गराएका छन् । राजपा मधेश मुद्दा समातेर चुनावको विरूद्ध आन्दोलनमा एक्लै होमिएको छ । दोश्रो चरणको चुनावको मत गणना चलि रहँदा एमालेले संशोधन प्रस्ताव पास गरि २ नं. प्रदेशको चुनाव गराउने भने पनि मतगणनाको आखिरमा संशोधन प्रस्ताव पास गराउने आश्वासनबाट स्खलित भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
खाल्डा पुरेर मात्रै काठमाडौंको समस्या समाधान हुँदैन : भाइकाजी तिवारी
विकसित र पूर्वाधारयुक्त राजधानी होस् भन्ने चाहना अझै पूरा भएको छैन । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्तका रूपमा काम गरिरहँदा र एउटा सर्वसाधारणका रूपमा पनि यहाँको मनमा के लागिरहेको छ ? दिगो रूपमा राजधानीको विकास गर्ने हाम्रो योजना बन्न सकेको छैन । टालटुल मात्रै भइरहेको छ । ०३३ सालदेखि परिकल्पना गरेअनुसार राजधानीका सडक अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चौडा हुन सकेका छैनन् । हामीले जानेर होस् वा नजानेर अथवा सरकार मौन बसेर होस् वा जनताले बुझ पचाएर होस्, मापदण्डअनुसार घर नबनाइदिएका कारण सडक चौडा गर्दा छेउका घर भत्काउनुपर्यो ।	थप पढ्नुहोस्
एसियाको भावी कृषिक्षेत्र, नेपाल, भारत, चिन वा अन्य कुनै ?
११ साउन, काठमाडौं । खाद्यान्नको अभाव एसियामा बसोबास गर्ने धेरैका लागि पुरानो सम्झनाको कुरा हो । तथापि, द्रुत गतिमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न र पोषण पुर्याउन यस क्षेत्रले सङ्घर्ष गर्न थालेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो फेरिपनि जीवनको पीडादायी यथार्थ बन्नसक्ने देखिन्छ । एसिया हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न बजार हो र सन् २०५० सम्ममा यसको जनसङ्ख्यामा ९० करोड थप हुन गई पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्